Thola 346-362 Lakeshore Road West, Lot 15, Oakville, KuL6k 1g1 kuvuliwe Realtyww Info
Real Estate Listings: » Residential homes » CA » Manitoba » Oakville » 346-362 Lakeshore Road West, Lot 15, Oakville, KuL6k 1g11
346-362 Lakeshore Road West, Lot 15, Oakville, KuL6k 1g1
Ikhodi Yokuposa: L6k 1g1
Isikhathi manje ... Yakha ikhaya lakho "ngolunye usuku" ekhaya lakho esakhiweni esakhiwe endaweni yomlando eningizimu-ntshonalanga ye-Oakville. Impahla, i-Circa 1920, ingelinye lamathuba okugcina asezitolo ase-Oakville. Le cul-de-sac ethulile inikeza ukubukwa okuhle kwechibi, ama-Oaks amadala, aneminyaka eyikhulu futhi ashesha ukuya edolobheni lase-Oakville, eKerr Village nase-Appleby College. Uma usuphothuliwe lo mphakathi uzokhombisa ukunethezeka okungaphelelwa yisikhathi, omele indawo ezungezile nesifiso sawo sabantu abaphansi. Le yindawo ekahle yabagibeli abakhulu, amaminithi asemgwaqweni omkhulu futhi atholakala kalula phakathi kweziteshi ze-Oakville neBronte GO, nemizuzu engama-30 kuphela ukufika ePearson. Izici Zomthelela Wendawo: Umtapo Wezincwadi, UMgwaqo Omkhulu Omkhulu, Ukuhamba Komphakathi, Indawo Ethulile, IzikoleIzinsizakalo: EzikaMasipala kuya kuLot Line, Izibani ZemigwaqoSewer: Indle (Umasipala) Uhlobo Lomhlabathi: Okunye (bona ukuphawula) Umthombo Wamanzi: Umasipala